साथीहरूसँग घडी 46
कुन ग्रहहरू, धातु र पत्थरहरू सात ग्रहहरूमा आबद्ध छन्?
त्यहाँ सौर स्पेक्ट्रमका सात र colorsहरू छन्, रातो, सुन्तला, पहेलो, हरियो, निलो, नीलो, बैंगनी। यो प्रिज्मद्वारा सूर्यको किरणको किरणको भाग हो र सतहमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। यी सात र colorsहरू केन्द्रमा फिर्ता प्रतिबिम्बित हुन सक्छ र फेरि प्रकाशको किरण हुन सक्छ रंग यी सात ग्रहहरू, मंगल, सूर्य, पारा, शनि, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रमा अनुरूप छन् भनिन्छ। त्यस्तै सात धातुहरू पनि छन्, फलाम, सुन, पारा, सिसा, टिन, तामा, चाँदी। रंग, धातु र ग्रहहरू पत्राचार गर्न र एक अर्कामा सम्बन्धित छन् भनिन्छ। यी ढु ,्गाहरू, गार्नेट, नीलम, ब्लडस्टोन, हीरा, पन्ना, अगाटे, रुबी, सार्डोनिक्स, नीलमणि, ओपल, पुखराज, फ़िरोज़ा बाह्र महिनाको साथ जोडिएको मानिन्छ; प्रत्येकलाई केहि खास प्रभावहरू हुन्छ जब निश्चित दिनहरूमा लगाइन्छ, तर विशेष गरी यो महिनाको जुन यो सम्बन्धित छ। तन्त्रमन्त्रका लेखकहरूले विभिन्न वर्गीकरण र रंग, धातु र ग्रहहरूको पत्राचार दिएका छन्। जुनसुकै वर्गीकरण अपनाईन्छ, यसको उद्देश्यले लगाउने, छुट्टै वा संयोजनमा, र colors्ग, धातु र ढु stones्गामा फाइदा लिन कुन नियम र विधिहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ।
के रंग, धातु र ढुones्गाको पहिरन निर्धारण गर्नु पर्छ त्यो पहिरन मुनिको त्यो ग्रहको पक्षले जन्मेको थियो?
यदि कसैले विश्वासको प्रभावकारितामा विश्वास गर्दछ; ऊसित विश्वास छ भने यदि उसले र colors्ग, धातु र ढु stones्गा लगाएर अरूलाई चोट पुर्याउने चाहाना गर्छ। हो। यदि उसले यसलाई हास्यास्पद अभ्यासको रूपमा लिन्छ, तर त्यसले यो कसरी कार्य गर्दछ भनेर हेर्न प्रयास गर्दछ; यदि उसले रंग, धातु र ढु stones्गाको शक्तिमा विश्वास गर्दछ र कुनै चीजमाथि अनावश्यक वा खराब प्रभाव पार्न कुनै वस्तुलाई लगाउँदछ — होईन।
के रंगहरू, धातुहरू र ढु any्गाहरूसँग कुनै विशेष सद्गुणहरू छन्, र कसरी ती ग्रहहरूको सम्बन्ध बिना तिनीहरू लगाउन सकिन्छ?
रंग, धातु र ढु stones्गाको विशेष मूल्य हुन्छ, राम्रो वा खराब। तर प्रत्येक र colors्ग, धातु र ढु stones्गाको शक्ति यसको उत्पत्तिको प्रकृति, यसको तयारी गर्ने तरिका, वा यसलाई प्रभाव पार्ने प्रभावद्वारा निर्धारण गरिन्छ। रंगका केही खास मूल्य हुन्छ र त्यसले केही प्रभाव पार्छ भन्ने सोचाइलाई गिल्ला गर्ने झुकाव राख्ने व्यक्तिले गोरुको अघि रातो कोट लगाएको खण्डमा आफ्नो दृष्टिकोण बदल्ने कारण हुनेछ।
चुम्बकको साथ प्रयोग गर्ने मानिस केवल काल्पनिक वा अन्धविश्वासको रूपमा हेर्नेछैन किनकि केहि धातुहरूमा तन्त्रमन्त्र गुणहरू छन्। कसैलाई पनि श doubts्का छैन कि त्यहाँ एउटा विशिष्ट आकर्षण छ जुन पत्थरहरू सबै उमेरहरूमा व्यक्तिहरूको लागि थियो। आर्थिक वा सजावटी उद्देश्यको साथमा र्गहरूले व्यक्तिहरूको भावनाहरूमा विशेष प्रभाव पार्छ। यो प्राय: मनाइन्छ कि जब कोही व्यक्तिहरू कुनै खास मानसिक वा भावनात्मक अवस्थामा जान्छन्, तिनीहरूले केहि र colorsहरू देख्दछन् जुन उनीहरूको अवस्थाको विशिष्ट हुन्छन्। उदाहरण को लागी: अपराध स्वीकार गरेका अपराधीहरु भन्छन् कि उनीहरु आफ्नो हत्याको आयोग भन्दा ठीक अघि रातो देखेका थिए। अर्कोतर्फ, ध्यानका अवधिहरूलाई दिइनेहरू, तिनीहरू शान्त र उद्देश्यपूर्ण आकांक्षाको स्थितिमा प्रवेश गर्दा उनीहरूले पहेंलो वा सुनौलो रंग देख्छन।
धातुको तन्त्रमन्त्रको महत्व र मान छ, साथै ती सामान्य प्रयोगहरूका लागि जुन तिनीहरू राखिन्छन्, र त्यसकारण ढु stones्गा पनि हुन्छ। तर यी मानहरू अध्ययन गर्न र सिक्नुपर्दछ। इन्द्रियहरू सचेत हुनुपर्दछ उनीहरूको मानहरू व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु अघि शरीर र कारणको लागि खतरा बिना। धातु र विज्ञानको रूपमा शाब्दिक मान र धातुको प्रयोगको ज्ञानको अधिग्रहणको लागि अध्ययन र प्रशिक्षण आवश्यक छ। र colors्ग, धातु र ढु about्गाका बारे जसको अनुमान वा छाप छ, जसको भित्री चेतनाहरू खोलिएका छैनन्, जसले आफ्नो इन्द्रियलाई प्रशिक्षण दिँदैन र आफ्नो दिमागलाई अनुशासन दिदैन, अन्धा विश्वासमा कार्य गर्न सक्छ र केही परिणामहरू लिन सक्छ, तर ऊ उत्साहित हुनेछ र उप हो -उहाँको उपहास — र ऊ अन्धा रहनेछ।
रंग, धातु वा ढु stones्गा लगाउन सकिन्छ ग्रहको ख्याल बिना जब ऊसँग शक्ति छ जुन ज्ञानबाट जन्मेको हुन्छ, र जुन र or्ग, धातु वा ढु of्गाको प्रभाव भन्दा उत्कृष्ट हुन्छ। कुनै पनि बाह्य शक्तिले उसलाई नोक्सान गर्न सक्दैन भन्ने दृढ र अटल विश्वास, भौतिक वस्तुहरूबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रभावको लागि औषधि हो। यो विश्वास र शक्ति सही मनसाय, सही विचार, दिमागको सही दृष्टिकोणबाट आउँदछ। जब एकसँग यी, रंग, धातु र ढु stones्गाका साथ, तिनीहरूका ग्रह प्रभावहरू उहाँमा कुनै द्विपक्षीय प्रभाव पार्न सक्दैन। तर त्यसोभए, उसले उनलाई लगाउन आवश्यक पर्दैन।
कुन पत्रहरू वा संख्याहरू जोडिएका छन् वा ग्रहहरूमा संलग्न छन्?
पत्र, संख्या, नाम, छाप, सिजलहरू, ज्योतिष, रसायनशास्त्र र जादू मा लेखकहरु द्वारा ग्रहहरु को विभिन्न रूप मा वर्णन गरिएको छ, र विभिन्न खाता र आवेदन यी विषयहरु संग व्यवहार पुस्तकहरु मा पाउन सकिन्छ। यहाँ त्यस्तो ज्ञानको लागि कुनै दावी गरिएको छैन, न त यसलाई प्रदान गर्नका लागि सही। "ग्रह" का अक्षर र नामको बारेमा कुनै तन्त्रमन्त्र ज्ञान पुस्तक वा लिखित फारम मार्फत सिधा प्रदान गर्न सकिदैन। पुस्तकहरूले धेरै जानकारी दिन सक्दछन्, तर ती ज्ञान प्रदान गर्न सक्दैनन्। ज्ञान व्यक्तिगत प्रयासबाट प्राप्त गर्नुपर्दछ। ज्ञानको अनुभवको नतिजालाई उत्तम प्रयोगमा राखेर प्राप्त गरिन्छ। अक्षर, संख्या र नामहरूको ज्ञान आउँदछ, अक्षरहरूको अंश र फारामहरू र उनीहरूका संयोजनहरूको बारेमा विश्लेषण र विश्लेषण गरेर। जसको मनको प्रवृत्ति अक्षर, संख्या, नामको तन्त्रमन्त्र पक्षमा छ, उनीहरूको बारेमा सोच्न र सैद्धान्तिकरण गर्नु राम्रो हो, तर सिद्धान्तलाई निश्चितता नदिनुसम्म सिद्धान्तहरूलाई अभ्यासमा राख्नु हुँदैन। अक्षर, संख्या, नाम, रंग, धातु वा ढु ,्गाका बारे सिद्धान्त र अभ्यास गरेर निश्चितता प्राप्त गर्न सकिदैन। यसका बारे निश्चितता केवल तत्व र शक्तिहरूको सामर्थ्य र नियन्त्रणको साथ आउँदछ जुन तिनीहरू बाह्य प्रतीकहरू हुन्, र जुन इच्छा, भावना र भावनाहरू उहाँ भित्र प्रतिनिधित्व गर्दछ। धेरै जना alकेमिस्टहरू र जादूगरहरू शोकमा आए किनभने उनीहरूले संसारमा केहि पनि गर्न नसक्ने प्रयास गरेका छन्, भित्रको संसारमा के गर्नुपर्दछ।
दृश्य रंगहरू मानसिक स्थिति र भावनाहरूको प्रतिबिम्ब हो। धातुहरू अदृश्य तत्वहरूको अवक्षेपण वा ठोसकरण हो जससँग प्रत्येक तत्वको आत्मा जोडियो र यसको माध्यमबाट यसले काम गर्दछ। ढु stones्गालाई पनि त्यस्तै भन्न सकिन्छ। धातु र ढु stones्गा चुम्बकीय वा इलेक्ट्रिक हुन्। जहाँ यी जान्छन्, तत्त्व वा तिनीहरूसँग जोडिएका शक्तिहरू उत्प्रेरित हुन सक्छन् र चुम्बकीय बल फलामले सञ्चालन गर्दछ, वा विद्युतीय शक्ति तामाको तारले सञ्चालन गरे झैं संचालित हुन सक्छ। रंग, धातु वा ढु stones्गाको पहिरनमा ब्यूँझ्न र उत्साहित हुन सक्छ, जुन तत्व वा बाह्य बलसँग मिल्दोजुल्दो छ, र त्यस्ता तत्वहरू वा शक्तिहरूलाई उनीहरूको संगतमा उनीहरूको इन्द्रियको माध्यमबाट कार्य गर्न प्रेरित गर्दछ। केवल भित्रमा नियन्त्रण बिना नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।